Abe-Vibe FM benza okuhlukile – Isambane News
Home > Entertainment > Abe-Vibe FM benza okuhlukile
Abe-Vibe FM benza okuhlukile
August 16, 2018 Isambane News
Intatheli YeSambane- Abasakazi be-Vibe 94.7 FM bahlele umcimbi wamahhala ozojabulisa abalaleli bohlelo njengoba kuzosinwa kudedelwana kudedelelwana ngomculo emcimbini obizwa nge-Durban Rocks Experience.
UZandile Gumede noSamaJobe abasakaza uhlelo olubizwa nge-Durban Rocks njalo ngomgqibelo emsakazweni i-Vibe FM ezinze eThekwini elokishini lwakaMashu enyakatho yeTheku, bahlele indumezulu yomcimbi ozokuba ngomhlaka-24 August 2018 e-Urban Lounge.
Kubaculi abazobe bekhona kubalwa, uFey wodumo lwengoma i-Brand New ka-Proffesor, uBright Deep, Aee-Museeq, Amagongo, Top Virus nabanye abaningi. Izihambeli kukhona uLindani “Leeh” Hlophe woKhozi FM, uSiyabonga “Worldwide” Msomi we-DYR FM, Thlani Bhapipilo nabanye kanye nabasakazi be-Vibe FM.
USamaJobe uthi ukwenza lomcimbi, kungenxa yokwenza ubudlelwane obuhle phakathi kwabo njengabasakazi nabalaleli. “Sibone sekuyisikhathi sokuthi sisondeze abalaleli bethu eduze kwethu kakhulu kunakuqala, ngalomcimbi sinethemba lokuthi ubudlelwane bethu buzoqina kakhulu kunakuqala,” kubeka uSamaJobe
Radio & Television Workshop
Durban Rocks Xperience